Andrey Arshavin tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pahaterahana
Home TAFIKA ASIA FOOTBALL Andrey Arshavin tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pahaterahana tsy hita isa
LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny filalaon'ny baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Shava'. Ny tantaram-pianakavian'i Andrey Arshavin momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra momba ny tantaram-pitiavana dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Lets Begin.
Andrey Arshavin tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra anarana Biography Facts-Voalohandohan'ny fiainana
Andrey Sergeyevich Arshavin teraka tamin'ny 29 May 1981 tao St. Petersburg nataon'i Sergey Arshavin (ray) sy Tatiana Arshavina (reny).
Tsy maty noho ny loza iray izay mety nahafaty azy izy rehefa tratran'ny fiara izy. Nisaraka ny ray aman-dreniny fony izy 12, fotoana iray izay nila azy ireo miaraka. Ny tsy maintsy hifikirana amin'ny reniny dia ny vokatry ny teniny satria mahantra ny reniny. Andrey dia tsy maintsy natory tao amin'ny efitranon'ny tranom-patana iray mafy sy ny reniny. Nofinofy ho lasa mpilalao baolina kitra izy hatramin'ny fahazazany.
Soa ihany fa nahatsiaro azy ny dadany ary voatery nanampy azy hanohy ny nofinofiny. Ny rainy no nandresy lahatra azy hanohy ny asany amin'ny baolina kitra taorian'ny tsy fahombiazany ho lasa mpilalao baolina matihanina.
Nanomboka nilalao baolina i Arshavin tamin'ny mbola kely ary fito taona. Ny rainy dia nanoratra azy tao amin'ny Smena football academy of Zenit, ny klioban'ny tanindrazany. Ny Ashavin dia natao handinihana lohahevitra lehibe kokoa ho an'ny mpianatra ho an'ny atleta raha mandinika ny baolina kitra amin'ny dingana ara-potoana. Noho izany dia nanatrika sekoly tsy lavitra teo akaikin'ny fianarana baolina kitra izy. Nasaina namaky ny bokiny izy ary nilalao baolina niaraka tamin'ny fotoana iray ihany.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nitombo ny asany tamin'ny lalao, dia nitombo ny fitiavany ny baolina kitra raha toa ka nihalalina ny fanabeazana. Indraindray, tsy afaka nifantoka intsony tamin'ny oniversite izy. Ny tsy fandeferany amin'ny akademisiana dia matetika mitarika amin'ny fitondran-tena ratsy.
Araka an'i Andrey "Nanao ratsy tany an-tsekoly aho. Rehefa izaho tamin'ny kilasy faharoa dia nandrava ny gazety firaketana an-tsoratra tao amin'ny kilasy fotsiny aho satria tsy te hanatrika kilasy aho. Ity tranga ity no nanaisotra ahy. "
Tsy maintsy niverina tany amin'ny akademia izy mba hiaraka amin'ireo namany baolina kitra. Izy no zazakely indrindra ary koa ny kapitenin-tsoany. Tsy ela dia nanjary mpilalao baolina kitra baolina kitra izy.
Andrey Arshavin tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra anarana Biography Facts-Karohy amin'ny famintinana
Arshavin no nandray anjara voalohany tamin'ny baolina matihanina tamin'ny August 2, 2000. Mampihomehy, nitranga tany amin'ny tany anglisy izany. Nosoloin'i Andrey Kobelev, vetaveta 19 taona, nandritra ny fandresena 3-0 an'i Zenit nandresy an'i Bradford City tao amin'ny Cup Intertoto.
Tsy maintsy niandry taona maromaro ilay tanora mba hanomboka tsy tapaka ny ekipan'ny St. Petersburg nanomboka ny iraika ambin'ny folo. Amin'ny ankapobeny dia nandany sehatra valo miaraka amin'i Zenit izy, nahatratra ny tanjona 71 ary nanolotra 100 fanampiana amin'ny endrika 281 amin'ny fifaninanana Rosiana sy iraisam-pirenena. Nanjary maherifo ho an'ny mpankafy St. Pete izy, izay nanonona anarana azy "Shava", ary ny tena mari-pamantarana ny klioba avy amin'ny renivohitra avaratra.
Nantsoina hoe Mpilalao baolina kitra ao Rosia ho an'ny taona 2006 izy, saingy i Arshavin nandritra ny roa taona manaraka niaraka tamin'ny klioba - raha nandray ny fiampangany ny polisy Holandey - izay no nahomby indrindra.
Efa hatramin'ny taona lasa izy no mpankafy an'i FC Barcelone ary tsy nandà mihitsy ny nofiny hilalao amin'ny klioba Catalan. Arsenal no nangalatra ny fony.
Andrey Arshavin tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra anarana Biography Facts-Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Teraka tamina fianakaviana iray mahazatra izy. Ny rainy Sergey Arshavin dia mpilalao baolina amperin'asa. Tatiana Arshavina no renin'ny mpilalao baolina kitra Rosiana Andrei Arshavina. Sergey Arshavin dia maty noho ny tsy fahombiazan'ny fony tamin'ny taona 40.
Andrey Arshavin tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra anarana Biography Facts-Relationship Life
Yulia Arshavina teraka tamin'ny 3 June 1985 (taona 32), dia Andrey Arshavin vady voalohany. Nivady tao 2004 izy ireo ary nisara-panambadiana tao amin'ny 2013. Arshavin dia manan-janaka telo miaraka aminy - Arseniy Arshavin, Artem Arshavin ary vavy Yana Arshavina. Taorian'ny fisaraham-panambadiany, dia navotsotra i Ashavin. Mampalahelo fa efa telo taona mahery izay dia tsy nifampiresaka izy ireo ary tsy nahita ny zanany. Tsy nanakana azy tsy hanao izany i Yulia. Fa i Ashavin kosa tsy nanao ny fanosehana. Naniraka vola sy fanomezana fotsiny izy.
Voalaza fa 3 taona taorian'ny fisaraham-panambadiany, nanapa-kevitra ny hanambady i Ashavin. Ny fanapahan-keviny dia taorian'ny fifankatiavana tamin'ireo zanany tamin'ny vadiny taloha. Nampifamatotra ny knot niaraka tamin'ny Alice Catimini, ilay amboara efa ela izy. Ireo mpivady dia nanambady tamin'ny Septambra 1, 2016 tao Saint-Petersburg.
Ny lanonana dia nanatrika fotsiny ny olona akaiky indrindra, anisan'izany ny ankizy avy amin'ny fanambadiana voalohany nataon'i Alice, nandritra ny lanonana dia nanapa-kevitra ny hanao ny zavatra rehetra mangina ao an-trano ihany koa ny mpivady vao haingana. Fantatra ihany koa fa i Alice dia nanova ny anarany, nanjary Arshavina.
Andrey Arshavin tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra anarana Biography Facts-Fashion Designer
Arshavin koa dia nanamarina ny mari-pahaizana sy ny fanao amin'ny Fashion Design.
Andrey Arshavin tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra anarana Biography Facts-Politisianina
Tao amin'ny 2007, nandray anjara tamin'ny fifidianana izy ho mpirotsaka ho an'ny Antenimieran'ny Lalàmpanorenan'i St. Petersburg ho an'ny antoko United Russia. Ilay mpilalao baolina kitra dia nahazo ny fifidianana, saingy nanolotra ny didiny taty aoriana.
Ny mpanorina azy dia nantsoina hoe tanàna malazany "Arshavinka" taorian'ny mpilalao baolina taloha. Izany dia vokatry ny fitiavana ananany.
Andrey Arshavin tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra anarana Biography Facts-Mpanoratra
Andrey Arshavin dia mpanoratra, izay manana boky telo ao amin'ny resadresany: "Euro-2008. Guus sy ny ekipany. Ny Diarin'i Andrey Arshavin "; "Nanao izany izahay! Ny Tantaran'ny Fandresena Lehibe "; ary "Arshavin, anisan'izany ny iray amin'ireo lohateny sy valiny 555 momba ny vehivavy, vola, politika ary baolina kitra.
Andrey Arshavin tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra anarana Biography Facts-Charity
Izy koa dia mandray anjara amin'ny asa soa. Arshavin dia nanaiky ny tolotra mba ho lasa ambasadaoron'ny SOS Children's Villages ao an-tanànan'i Pushkin akaikin'i Saint-Pétersbourg.
Ny tantaran'i Jack Wilshere momba ny tantaram-pitiavam-bolo Plus Plus dia navoaka tamin'ny tantaram-piainany